Ozizi Big Bang chịkọtara: mbido na njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú eluigwe na ụwa si kee, oleekwa ihe mere e ji nwee kpakpando, mbara ala na ụyọkọ kpakpando? Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị nde mmadụ jụrụla kemgbe ụwa. Kpọmkwem, ndị sayensị chọrọ ịchọta nkọwa maka ihe ịtụnanya niile dị adị. Site ebe a mụrụ nnukwu Bang tiori. Maka ndị na-amatabeghị, ọ bụ tiori na-akọwa mbido eluigwe na ala anyị. Ọ na-anakọta nkọwa nke ịdị adị nke mbara ala na ụyọkọ kpakpando.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata etu e siri kee mbara igwe anyị, n’ozi a anyị ga - agwa gị ihe niile. You ga-achọ ịmara nkwupụta Big Bang n'ụzọ miri emi?
1 Njirimara echiche nke Big Bang
2 Nhazi nke kpakpando na galaxies
3 Ihe akaebe nke eluigwe na ala na-agbasawanye na mgbawa
4 Ndị nchọpụta na echiche ndị ọzọ
Njirimara echiche nke Big Bang
A makwaara ya dị ka Ozizi Big Bang. Ọ bụ nke na-ekwusi ike na eluigwe na ala anyị dịka anyị si mara na ọ malitere ọtụtụ ijeri afọ gara aga na nnukwu mgbawa. Ihe niile dị na mbara igwe taa bụ otu ihe.
Site na mgbe ntiwapụ ahụ, ihe bidoro gbasaa wee ka na-eme taa. Ndị sayensị na-ekwughachi na eluigwe na ụwa na-agbasa. N'ihi nke a, echiche Big Bang gụnyere echiche nke mbara igwe na-abawanye. Ihe echekwara n'otu ebe amaliteghị ịbawanye, kamakwa ọ malitere ịmalite usoro dị mgbagwoju anya. Anyị na-ezo aka na atom na ụmụ irighiri ihe nke nta nke nta na-akpụ ihe ndị dị ndụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị ekwuola na ụbọchị mmalite nke Big Bang. Ọ malitere site na ihe dịka 13.810 nde afọ gara aga. N’oge a nke igwe kere ụwa, a na-akpọ ya primeval eluigwe na ala. N'ime ya, a ga-enwerịrị ahụ ike dị ukwuu.
Site na mgbawa a, e guzobere proton mbụ, neutron na electron. A haziri proton na neutron dị ka atọm nke atọm. Agbanyeghị, elektrọn ahụ, nyere ikike eletrik ha, haziri ha gburugburu. N'ụzọ dị otú a ihe malitere.
Nhazi nke kpakpando na galaxies
Anyị anwụ dị n'ime ụyọkọ kpakpando a maara dị ka Milky Way. Kpakpando nile nke anyị maara taa malitere ịmalite ogologo oge mgbe Big Bang gasịrị.
A kwenyere na kpakpando ndị mbụ malitere ịmị ijeri 13.250 afọ gara aga. Odika 550 nde afọ mgbe ntiwapụ ha malitere ịpụta. Otu ụyọkọ kpakpando ndị kasị ochie malitere ijeri afọ 13.200 gara aga, nke mere ha ji aka nka. E guzobere usoro mbara igwe anyị, Sun na mbara ala afọ 4.600 ijeri gara aga.
Ihe akaebe nke eluigwe na ala na-agbasawanye na mgbawa
Iji gosipụta na echiche Big Bang nwere ezi uche, a ghaghị ịkọ ihe akaebe na eluigwe na ala na-agbasa. Ndi a bụ ihe akaebe na nke a:
Olbers nzuzu: Ọchịchịrị nke elu igwe abalị.
Iwu Hubble: Enwere ike ikwenye ya site n'ịhụ na ụyọkọ kpakpando ndị ahụ na-apụ n'ebe ibe ha nọ.
Nwanyi nwoke nke ikesa okwu.
Tolman utịp (mgbanwe na elu gloss).
N'ebe dị anya: A na-ahụ diral nke oge na akụkụ ya.
Mgbe oge mgbawa ahụ gachara, urughuru nke ọ bụla na-agbasa ma na-agagharị n’ebe ibe ha nọ. Ihe mere ebe a bụ ihe yiri ihe na - eme ma anyị fụọ balloon. Dị ka ikuku anyị na-ewebata, ikuku ikuku na-agbasawanye ruo mgbe ha ruru mgbidi.
Ọkachamara n'ihe ọmụmụ physics jisiri nwugharia usoro iheomume nke ihe bidoro na 1/100 nke nke abụọ mgbe Big Bang gasịrị. Ihe nile emere ka ewepụtara bụ ihe elementrị ndị amaara. N'etiti ha anyị hụrụ electron, positrons, mesons, baryons, neutrinos, na photon.
Fọdụ ngụkọta oge na-egosi na hydrogen na helium bụ isi ihe sitere na mgbawa ahụ. Ihe ndị ka sie ike mechara mee n’ime kpakpando. Ka eluigwe na ala na-agbasa, ụzarị radieshọn sitere na Big Bang na-aga n'ihu na-ajụ oyi ruo mgbe ọ ruru okpomọkụ nke 3 K (-270 Celsius C). Ndị na-enyocha mbara igwe na-achọpụta ihe ndị a nke radieshon microwave siri ike na 1965. Nke a bụ ihe na-egosi mgbasawanye nke eluigwe na ala.
Otu nnukwu obi abụọ ndị sayensị nwere bụ iji dozie ma ọ bụrụ na eluigwe na ala a ga-agbasa ruo mgbe ebighị ebi ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-agbakọta ọzọ. Ihe gbara ọchịchịrị nwere nnukwu mkpa na ya.
Ndị nchọpụta na echiche ndị ọzọ
Ozizi nke elu-igwe na-agbasa edepụtara na 1922 nke Alexander Friedmann dere. Ọ dabere na nchepụta Albert Einstein (1915) banyere njikọta izugbe. Mgbe e mesịrị, na 1927, onye ụkọchukwu onye Belgium ahụ bụ Georges Lemaître nwetara ọrụ ndị ọkà mmụta sayensị bụ Einstein na De Sitter ma ruo nkwubi okwu ndị ahụ Friedmann kwuru.
Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị adịghị abịa nkwubi okwu ọzọ, naanị na eluigwe na ala na-agbasa.
E nwere echiche ndi ozo banyere okike nke elu igwe nke na-adighi mkpa dika nke a. Ma, o nwere ndị nọ n’ụwa kwenyere ma were ha dịka eziokwu. Anyị depụtara ha n'okpuru.
Nnukwu ozizi Crunch: Ozizi a na-atọ ntọala ya na eziokwu ahụ bụ na mmụba nke eluigwe na ala ga-eji nwayọ nwayọ nwayọ ruo mgbe ọ ga-amalite ịdọghachi. Ọ bụ maka nkwekọrịta nke eluigwe na ala. Mgbapu a ga - ejedebe na nnukwu implosion a maara dị ka Big Crunch. Enweghi otutu ihe akaebe na-akwado echiche a.
Eluigwe na ala: Ọ bụ maka ụwa anyị na-agagharị na Big Bang na Big Crunch.
Ọnọdụ ala na ihe okike na-aga n'ihu: Ọ na-ekwusi ike na eluigwe na ala na-agbasawanye nakwa na njupụta ya na-adịgide adịgide n'ihi na e nwere ihe dị n'okike na-aga n'ihu.
Nkwupụta gbasara onu oriri: O dabere na otu njirimara dịka Big Bang mana ọ na-ekwu na enwere usoro izizi. A na-akpọ usoro ahụ mmụba na mgbasawanye nke eluigwe na ala bụ ngwa ngwa.
N’ikpeazụ, e nwere ụfọdụ ndị mmadụ chere na ọ bụ Chineke kere eluigwe na ụwa ma ọ bụ ihe ọzọ dị n’eluigwe.
Iji edemede a ị ga-amụtakwu gbasara etu e siri kee mbara igwe na ịgbasawanye. Ì chere na otu ụbọchị eluigwe na ala ga-akwụsị ịgbasa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Big Bang Theory
Na mmalite nke Eluigwe na Ala
E nwere echiche dị iche iche na nkwupụta dị iche iche banyere Mmalite nke Eluigwe na Ala, mana maka m, eluigwe na ala pụrụ iche, ọ ga-adịkwa mgbe niile, na ọ dịkwa adị ga-adịkwa; na na ọ bụ mgbe niile ka ọ na-agbanwe agbanwe, na anyị bụ akụkụ ya; ebe oge na-adịghị adị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbanwe n'ime oge ugbu a, nke bụ ebe mgbanwe ndị anyị bi na-ewere ọnọdụ; Ọ bụrụ na ịchọọ eluigwe na ala maka oge gara aga ma ọ bụ ọdịnihu ị gaghị achọta ya, n'ihi na ọ dị naanị ma dịrị ugbu a nke mkpụrụ obi, mmụọ, uche na echiche anyị. Oge tụọ bụ nanị ihe e kere eke nke nzukọ ụmụ mmadụ. Ọ dịghị onye nwere ike iche echiche n'oge gara aga ma ọ bụ kwaga ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'echiche nke ihe anyị chọpụtara ma debanye aha ya dị ka mgbanwe site na ihe anyị nọ na nke anyị bụ taa, na usoro nke mgbanwe na-aga n'ihu na mgbanwe, ebe anyị tinye olile anya anyi ka ibi ndu ka mma. Mmadu abughi onye kwusi Eluigwe na Ala; ọ ga - abụkwa obere onye na - ahụ maka mgbanwe, na - achọ ndụ kacha mma maka onwe ya. Ọ bụrụ na otu ụbọchị ụmụ mmadụ nwere ike ịmepụta ike nwere ike ibibi ụwa, ha ga-abanye na isi ya iji gbarie ya, na ezigbo enyi m, echere m na ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume, na omume nke mbibi onwe onye . Nke a bụ otú m si ahụ ya!
Zaghachi Luis Pulido
Carlos A. Pérez R. Ihe dijo
Kwesịrị ịkọwapụta (anaghị ebipụta nke a)
Zaghachi Carlos A. Pérez R.
Ekwere m na Chineke. Kọwaa m ugbu a tiori banyere otu esi kee anyị n’akpa nwa nwanyị na ihe kpatara na nwoke bụ nwoke na-eme ka nwanyị dị ime, ọ bụrụ na anyị bụ okike nke bing bang n’ihi na ụmụ mmadụ ọzọ sitere na mmekọahụ
Jaime Ferrés kwuru dijo
Ọ dị m ka ikwere na okike nke Eluigwe na Ala kwekọrọ na echiche Big Bang. Chineke dị tupu Big Bang, ọ bụkwa ya kpatara nnukwu mkpọtụ ahụ: ọ bụ Ya mere ihe niile na ike niile ozugbo ahụ. Mgbe ahụ, nnukwu mmụba, na obi jụrụ ndị sayensị na-akọwara anyị.
Ma Onye Okike Chineke na-akọwa ihe kpatara ntiwapụ ahụ.
N'ime Bible, e ji okwu ihe atụ kọwaa na e kere ihe dị iche iche n'usoro. Nkọwa nkọwa ahụ kwekọrọ na nkọwa Big Bang.
Zaghachi Jaime Ferrés
Nwagbara 21 dijo
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị Chineke kere Adam na Iv na mbido ihe niile, ha mepụtakwa ma mechaa ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha, ma Chukwu ekwenyeghị na mmekọrịta dị n’etiti ezinụlọ, kedu ka ihe niile ga-esi pụta?
Nnukwu mgbawa na-emepụta eluigwe na ala, ndụ na-apụta n'ụdị nje ndị dị ndụ, ụmụ nje na-agbanwe (ọ ga-akọwa ihe niile ha nwere ma ọ dị ka uche gị anaghị enye ọtụtụ ihe) ihe dị ndụ na-achọpụta na ụzọ kachasị dị irè iji mụta nwa bụ na ndụ wayzọ, n'ihi na achọrọ ihe abụọ ahụ, nwoke na nwanyị, spam na akwa gbakọtara wee kee ihe ọzọ dị ndụ. E KERE EKE.
Zaghachi Benito Albares
Jisos Kraist bu uzo dijo
Ngwakọta nke echiche.
Chukwu: Abụ m Alfa na Omega. (Big Bang) Jenesis: Okike nke Eluigwe na Ala. Na mbu Chineke kere eluigwe - (ya bu, eluigwe na ala nihi na elu-igwe abughi nkpuru osisi Ozone) - ... na ochichiri - (ochichiri) - kpuchie ahihia nke abis- (chakoo) - ..Chineke kwuru, sị: enwere ìhè ma nwee ìhè (electrons. Neutrons. Proton) ... na o kewara ya na ọchịchịrị (mgbawa na mmụba) na ìhè a na-akpọ ehihie na abalị ọchịchịrị (site na mgbawa ahụ ngwaahịa mbụ pụtara bụ hydrogen na helium (okike mmiri) ma ndi ozo ha mara site na Baibul ... Chineke nwere ufodu ndi ozo a na akpo ndi isi ndi mmuo ma rịọ onye ọrụ afọ ofufo ma nye Luz Bella "Lucifer" ka site na mkpebi nke ime mmụọ nwaa mmadu a choro ka ịhọrọ ezi ọjọ ... ngụkọta na anyị bụ ndị Reptilians ugbu a site na ụyọkọ kpakpando nke atọ ma hapụ ozi na Chukwu anyị kwenyere bụ Nature, ikuku, mmiri, ụwa, ọkụ, na ndị ọzọ ... anyị jupụtara na echiche na ọ bụ ụmụ mmadụ kpebiri ya. ndị nwere ihe akaebe naanị na a mụrụ anyị ma nwụọ na-amalite ma kwụsị Alfa na Omega nnukwu Bang
Zaghachi Jesus Christ mbụ